China Air Deodorizer fanamboarana sy orinasa | FIZA
Air Mender azo atao Portable
VONDRO NY BACTERIA & VIRUS MANAMORANA TAMIN'ANDRIAMANITRA TSY MISY
-Ny vokatr'io vokatra io dia voasedra amin'ny toerana mihidy, ny tena vokany mety tsy mitovy arakaraka ny toerana ampiasana azy.
-Ny vokatray tsy afaka mamono bakteria sy viriosy anaty trano rehetra.
-Miankina amin'ny toe-javatra iainana sy ny tontolo iainana manokana, mety tsy hitovy ny vokatr'io vokatra io.
Esory avy ao amin'ny kitapo ivelany ity vokatra ity ary esory ny tombo-kase miraikitra amin'ny kitapo aliminioma anatiny
Mazava ho azy 1 volana
Mamakia tsara ny fampitandremana alohan'ny hampiasana azy ary tazomy tsara
- Azafady mba tsy ho azon'ny ankizy sy ny biby fiompy ity vokatra ity.
- Ity vokatra ity dia tsy azo hanina, atelina indray mandeha, misotro rano betsaka ary mandrora ny atiny. Raha mifandray amin'ny hoditra na amin'ny masonao dia sasao amin'ny rano mikoriana be. Raha mbola misy toe-javatra tsy ara-dalàna hafa dia miangavy dokotera.
- Rehefa mampiasa ao an-trano, raha mahery ny fofona na miteraka fahatsapana tsy mahazo aina dia mijanonjanona avy hatrany ary ampiasao ny efitrano.
- Aza avela hifandray mivantana amin'ny hoditrao ny vokatra.
-Raha manao fanatanjahan-tena sy matory ianao dia aza mampiasa azy.
- Aza mampiasa an'ity vokatra ity amin'ny fampiasana hafa.
- Ity vokatra ity dia misy vokany mandriaka. Rehefa mampiasa dia azafady avelao ny sisin'ny lavaka rivotra lavitra ny akanjo na ny vokatra vita amin'ny hoditra.
- Ny atin'ny vokatr'ity vokatra ity (ClO corr) dia mahazaka metaly, alaviro ny vy rehefa mampiasa azy.
- Aza tehirizina ao anaty hafanana ambony na tara-masoandro mivantana.
- Rehefa mampiasa azy ety ivelany na amin'ny toerana misy fivezivezivezy tsara dia mety tsy ho tratra ny vokatra andrasana.
Manaraka: NBR Latex
Mpanamboatra rivotra ho an'ny kitapo Deodorizer